သန်းဆွေမိုး (ကလော) | MoeMaKa Burmese News & Media
Posts Tagged ‘ သန်းဆွေမိုး (ကလော) ’
သန်းဆွေမိုး(ကလော) – လောက
သန်းဆွေမိုး(ကလော) – လောက (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၆ တို့ရွာကြီး ဓားပြတွေဝင်စီးတော့ တို့ရွာကြီးနဲ့ တို့အိမ် သူခိုးတွေ ဗိုလ်ဝင်လုပ်တော့ အမြီးကုတ်ချောင်ကပ် ဘယ်မှာသွားနှပ်နေမှန်းမသိလိုက်ရတဲ့ ဒီခွေး ၊ ဟော…. ဓားပြလည်းဝေး...
သန်းဆွေမိုး (ကလော) ● ရောင်နီ (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၇၊ ၂၀၁၆ ဟို…. အရှေ့ဖျား စိန်ပွင့်ကလေးများ ကြဲပက်ထားတာကလွဲရင် မှိုင်းမှိုင်းညို့ညို့ မှုန်မှုန်ပြာပြာရီ မီးခိုး။ တပိုင်းကတော့ မည်းမည်းမှောင်မှောင်ထူပိန်းပိန်း ဒီလိုနဲ့ပဲ...